Yan Lin Aung | MoeMaKa Burmese News & Media
Yan Lin Aung - untitled
ရှင်ခြင်း ၊ သေခြင်း (Yan Lin Aung)
ကဗျာဆရာ ရန်လင်းအောင်၏ "ရယ်တရွေ့မောတရွေ့" ကဗျာစာအုပ် ထွက်
ရန်လင်းအောင် - ပိုကောင်းသွားမလား လို့
ရန်လင်းအောင် - ရေးလက်စ
ရန်လင်းအောင် - သင်္ကြန်ကျနေတာပဲ ...
Yan Lin Aung - Lights
Yan Lin Aung - Our Land Poem
ရန်လင်းအောင် - လိပ်ပြာ
ရန်လင်းအောင် – လိပ်ပြာ
လိပ်ပြာ ရန်လင်းအောင် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ခိုင်လုံတဲ့ ရနံ့တွေ ထဲထဲဝင်ဝင်မရှိသေးလည်း အတောင်ပံတွေ ဖွင့်မြဲ ပွင့်ဖို့ – ညှီနံ့တွေနဲ့ ဝေးရာ ညှော်နံ့တွေနဲ့ ဝေးရာ – ရှက်သွေးနဲ့...
ကဗျာဆရာ ရန်လင်းအောင်၏ “ရယ်တရွေ့မောတရွေ့” ကဗျာစာအုပ် ထွက်
ကဗျာဆရာ ရန်လင်းအောင်၏ “ရယ်တရွေ့မောတရွေ့” ကဗျာစာအုပ် ထွက် (မင်းရဲညွှန့်လှိုင်) မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ ကဗျာဆရာရန်လင်းအောင်၏ “ရယ်တရွေ့မောတရွေ့” အမည်ပေး ထားသော ကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ် ထွက်ရှိလာသည် ။...
ရန်လင်းအောင် – သင်္ကြန်ကျနေတာပဲ …
ရန်လင်းအောင် – သင်္ကြန်ကျနေတာပဲ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၅ ” ငြိ မ်းချ မ်းေ ရး!...
ရန်လင်းအောင် – ပိုကောင်းသွားမလား လို့
Photo Aung Htet ရန်လင်းအောင် – ပိုကောင်းသွားမလား လို့ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ပိုကောင်းသွားမလား လို့ အပျော်အပါးလျှော့တယ် အပျင်းပြေအလုပ်တွေ နားလိုက်တယ် ပိုကောင်းသွားမလား လို့ ကဗျာ...
ရန်လင်းအောင် – ရေးလက်စ
ရန်လင်းအောင် – ရေးလက်စ သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၄ သူတောင်စားက စပြီး သမ္မတ အထိ အားလုံး ရေးလက်စတွေပါပဲ ။ မှားပါ မှန်ပါ ပြင်ပါ ဆင်ပါ ဖြည့်ပါ...
ရန်လင်းအောင် ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၄ သွေးအားနည်းရပ်ဝန်းက ကြယ်ဖြူဖြူလေးတွေရဲ့ နံဘေးမှာ ငါအမြဲရှိမယ် ။ အပူပိုင်းဒေသက လေညှင်းကလေးရဲ့ လက်မောင်းသားနံဘေးမှာ ငါအမြဲရှိမယ် ။...
ရှင်ခြင်း ၊ သေခြင်းရန်လင်းအောင်၊ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ လေတိုက်တိုင်း လှုပ်ခတ်နေတဲ့ သစ်ရွက်ဟာ သက်မဲ့ဖြစ်တယ် ။ လေထုကို လိုရာပုံသွင်း လေထဲ လမ်းဖြစ်အောင်ခင်းတဲ့ ...
Yan Lin Aung – untitled
တပ်ချင်ရာတပ်လို့ရတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရန်လင်းအောင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဖို့ပြောသံ တစ်လုံး ပေါက်ပြန်ပြီး ဗုံးတစ်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ရေးဖို့ ဆိုသံတစ်လုံး ခွဲပြန်ပြီး ဗုံး တစ်လုံး ပြီးတစ်လုံး ဒါနဲ့ . ....
Yan Lin Aung – Our Land Poem
မြေသန့် ကမ္မ၀ါ … … မြေသန့် ကဗျာ ရန်လင်းအောင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ ငါတို့ … … … … …ဒီမြေကို … မလန့်လို့ဒီမြေကို … သန့်ဖို့ဒီမြေပေါ်အရောက်လာခဲ့ကြပေါ...
Yan Lin Aung – Lights
အလင်းပွင့်ရန်လင်းအောင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ အစိမ်းလည်း စိုစေအနီလည်း ရဲစေအ၀ါလည်း ၀င်းစေအပြာလည်း လွင်စေအဖြူလည်း လက်စေရေတိမ်နစ်သော အမောက်များသင်းခွဲခံရသော အမြီးများမနက်ဖြန်သဘက်မရွေ့စေလိုကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်မှာကိုယ့်လမ်းနဲ့ကိုယ်ဆူးငြောင့်ခလုတ်များ ကင်းပကြပါစေ...